Shirwaynaha xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha oo billawday - BBC News Somali
Shirwaynaha xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha oo billawday
Kulanka siyaasadeed ee ugu wayn dalka Shiinaha oo ah shirwaynaha xisbiga Shuuciga ah ayaa ka billawday magaalada Beijing iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa in kabadan saddex saac khudbad u jeediyay 2,000 oo ergo ah oo isugu timid caasimadda.
Madaxweyne Xi intii uu khudbaynayay wuxuu taxay guulihi uu dalku dhawaanahan gaaray isaga oo sheegay "in Shuuciyadda oo adeegsanaysa sifooyinka dambe ee Shiinaha" in ay suurtagalisay "in Shiinuhu uu noqdo dalwayn oo quwadaha adduunka ka mid ah" wuxuuna intaas ku daray in aysan ahayn in dalku uu soo guuriyo siyaaasaddaha arrimaha dibadda ee dalalka kale.
Waxyaabaha kale ee uu soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa
In uu si kooban uga hadlay in qorshaha labada marxaladood ah ee "casriyaynta shuuciyadda" la gaari doono 2050ka.
Wuxuu ka digay gooni u goosadnimada taas oo u muuqata in uu ula jeedo kacdoonka Xinjiang, Tibet iyo Hong Kong, wuxuu kale oo uu markale carabka ku adkeeyay mabaadiida dawladda ee ah in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah Shiinaha.
Waxaa kale oo uu sheegay "in Shiinuhu uusan albaabada ka xiran doonin adduunka" wuxuuna ballanqaaday dib u qaabayn dhanka dhaqaalaha ah oo dheeri ah, kuwaas oo ay ku jiraan yaraynta caqabadaha maalgashiga ajaaniibta.